Apple waxay caan ku tahay wax soo saarka ay deggan oo lagu kalsoonaan karo. iPhoto yimaado dhisay la Mac OS cusub. Sida laga reebo lahayn in barnaamijyada kale, dadka isticmaala iPhoto mararka qaarkood dhibaatooyin kala kulmaan la isticmaalayo. Iyadoo qaababka aad u badan sida tafatirka, qaybsiga, xarun lagu kaydiyo, barnaamijka dhaqmo si aan caadi ahayn. Laakiin waxaa war fiican ah inta badan dhibaatooyinka hagaajin la update ugu dambeeyay. Haatan aan aragno sida aan u hagaajin karaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka caanka ah ee iPhoto:
# 1. iPhoto ma dajiyaan doonaa Pictures
Mararka qaarkood iPhoto muujinaysaa qalad ah markii uu isku dayay in ay geliyaan sawiro iyo iyaga dajiyaan galay iPhoto. Baadi ayaa sheegay in aad qabtid file ah aqrin. Waxaad isku dayi kartaa qaar ka mid ah xalka caadiga ah sida barkinta camera oo dib mar kale surin ama rebooting your computer. Haddii kuwa aadan u xaliyo dhibka, markaas hubiyo shaqeynta disk adag ee kombiyuutar aad in ay si fiican u shaqeeya. Haddii taasi shaqeyn weydo aad markaas u heshaan sawirada, iyo in aad doonaysid in dajiyaan galka sawirka ku yaalla gal guriga ka. Markaas ha xaq guji maktabadda iPhoto iyo dooro "Show Xirmada Tusmada" doorasho. Waxaa soo celin doonaa sawiro aad u doonaysaan inaad soo dhoofsadaan. Dhaqaajiyaan meesha la doonayo on your computer. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay in la beddelo goobaha ammaanka on your computer inay dajiyaan sawirada.
# 2. iPhoto ilaaliyaa daryaan
Mararka qaarkood iPhoto waayo-aragnimo users soo noqnoqda wateen uu sabab u ah maktabadda kharribeen, database weyn oo adag ama musuq-maasuq in muuqaalada kasta. Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in dib barnaamijka oo dhan si ay u xalliyaan arrinkan. Laakiin reinstalling barnaamijka u baahan doontaa inaad reimport oo dhan sanamyadii. Halkii reinstalling, waxaad xallin karo dhibaatadan iyadoo la tirtiro file liiska oo qabaneysa gaar ah sida macluumaadka goobta soo celin codsiga in goobaha warshadda. File Liiska ku yaalla Dooratay aad user maktabadda Mac ee. Hel faylasha com.apple.iphoto.list oo tirtirto. Waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay dib u dhiska maktabadda ka dib markii tan tallaabo, oo waa hab si cadaalad ah oo fudud. Saxaafadda Apple iyo furayaasha fursadaha marka aad bilaabi iPhoto, ka dibna dooro dib u dhiska database maktabadda ka automatic dib-up.
# 3. iPhoto noqday mid aad gaabis ah
users iPhoto kulmaan interfaces aad u gaabis ah u database weyn oo adag iyo faylasha naftooda loo baahan yahay in dib loo dhiso ama waxaa cusboonaysiiyey. Dib u dhiska maktabadda sidoo kale xallin karo arrimaha kale ee la xiriira in Database iPhoto Library sida sawiro maqan, maktabadda la aqrin, iwm arrimo kale oo. Si loo xaliyo dhibaato, raad raac hore maktabadda iPhoto aad. Markaas iPhoto casriyeeyo si version ugu dambeeyay waxaa ka mid ah ka soo update Software ka menu Apple ah. CUSBOONAYSIINTA software-ka loo wanaajiyo laga yaabaa in aad waayo-aragnimo user. Haddii dhibaato weli ka dibna jiraan baaro waraaqaha tufaax sida Apple waxay bixisaa tilmaamaha gaarka ah ee dib u dhiska maktabadda iPhoto.
# 4. iPhoto aqoonsi la kulmo waa in aan ka shaqeeyo
Waa dhibaato aad caadi u ah in ay iPhoto users dunida oo dhan. Users kulantay dhibaatada ay sabab u tahay nasasho in iPhoto ogaado Waji database ah. Sababta ugu badan ee ka dhaca dhibaatadan waa la wadaago database dhexdooda users badan ku Mac ah oo taas laga yaabaa inaad lumiso xogta oo dhan maktabadda iPhoto taas oo musuqmaasuq kartaan software iPhoto ah. Waxaad hagaajin karo dhibaatadan iyadoo resetting database ah. Si aad dib, marka hore, waxaad u baahan tahay in ay tirtirto ka mid jira oo markaas la abuuro mid cusub. Markaasay bilaabi iPhoto, oo iskaan doonaa sanamyadiinna in muddo ah. Ka dib markii in, waxaad isticmaali kartaa iPhoto flawlessly.
# 5. Baadi cunto iPhoto
iPhoto yaraynaysaa tirada maktabadda iPhoto ah iyadoo la tirtirayo dhammaan sawirada nuqul kaydiyaa maktabadda. Laakiin mararka qaarkood iPhoto tirtirto hayaan ee sawirrada ah oo dhan badalo ama dib u nasiisay iyo sawiro thumbnail oo kor u qaso sawirada xal sare. Dhibaatadaan waa ogyahay sida qaladka cunto iPhoto. Dhibaatada Waxay tani dhacdaa marka codsiga iPhoto bixisaa macluumaad khalad ah oo ku saabsan image kasta. Dhibaatadu waxa ay muujinaysaa musuqmaasuqa ee iPhoto maktabadda ama jiritaanka cayayaanka ah ee iPhoto AppleScript. Ka soo kabashada maktabadda iPhoto iyo xariirta iPhoto in ay version ugu dambeeyay hagaajin karaa dhibaatadan.
# 6. Ma dajiyaan karaa iPhoto Library in aperture 3
Aperture siisaa inay helaan Flicker, MobileMe, Facebook, email, iwm la click of mouse ah. Laakiin kun oo dadka isticmaala dhibaato soo degida maktabadda iPhoto in aperture 3. qalad ayaa fariin la mid ah "maktabadaha soo degida ka qoraalkii hore ka badan iPhoto 7.1.5 ma taageersana. Fadlan maktabadda iPhoto aad la iPhoto 7.1.5 ama ka dib. "Ama" ma jirto meel ku filan oo lacag la'aan ah oo ku saabsan Aperture mugga maktabadda si ay u dajiyaan waxyaabaha soo xulay. Waxaa la qiyaaso karo in aad u baahan tahay ugu yaraan 1214 oo dheeraad ah MB ee bannaan. "Si loo xaliyo dhibaatadan, waxaad u baahan tahay gurmad iyo dib u dhiska maktabadda. Inkasta oo bilaabay iPhoto, hoos u hay furayaasha amarka ka dibna dib u dhiska iPhoto oo isticmaalaya hadal ay dib u dhiska. Dooro ka gurmad ah si toos ah la tayeeyo maktabadda iPhoto.
# 7. Ma ku dari karaa music ka Lugood ee slideshow a abuuray iPhoto
Ku darista music in slideshow waa fikrad aad u fiican si aad slideshow fantastic. Laakiin isagoo intaa ku daray ma ku dari kartaa music ka Lugood ee slideshow a abuuray iPhoto: darista music in slideshow waa fikrad aad u fiican si aad slideshow fantastic. Laakiin ku daray music ka Lugood ee iPhoto 11 shil laga yaabaa in barnaamijka oo dhan. Si loo xaliyo dhibaatada ugu horeysay ka tago iPhoto iyo abuurtaan Lugood. Riix File ee geeska bidix ee sare ee shaashadda. Markaas Library dooran dhibic ka hoos menu. Inaad doorato Abaabulaan Library. Dooranaysaa habayn files ee galka "Lugood Media." Riix OK si hawsha ay u dhammaystiraan.
# 8. iPhoto ma aqoonsana camera xiran kombiyuutarka
Mararka qaarkood iPhoto ma garan karaan camera si toos ah iyo u baahan tahay dhib. Ka hor inta dhib, hubi in camera waa la jaan qaada iPhoto. Camera Qaar ka taageertaa hab oo kala duwan si ay ula xiriiraan kombiyuutarka sida hab ballaaran lagu kaydiyo ama PTP (Picture- kala iibsiga-Protocol) hab. Isku day qaabab kala duwan in ay ku xidhmaan camera aad u iPhoto. Haddii aan ku caawin kartaa, ka dibna cusboonaysiiso Mac OS version, version iPhoto. CUSBOONAYSIINTA version iyo updates taageerada iPhoto camera.
# 9. gurmad iPhoto ku guuldareysto
Haddii aad dhibaato maktabadda iPhoto gurmad ka badan raad raac aan sameeyo si toos ah. Isticmaal mashiinka Time si ay gurmad maktabadda. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay ku soo noqdaan oo ay mashiinka Time doono sawirada si toos ah raad raac. Waxa kale oo aad soo celin kartaa images tirtiray in aragtida safarka waqtiga.
# 10. Picture muujinaya sida maran Wajigooda
Iyadoo abaabulka images in hab wajahaya, sawirada tusi sida maran, oo waxaa DOT line ku wareegsan ku laayeen meesha. Jeega koowaad haddii aad ka arki kartaa sawirada gujinaya bannaan ee dhibcaha maran. Haddii markaa aad aragto tiirarkii maktabadda database aad thumbnail ee iPhoto kharribmay. Tayeeyo aad thumbnail database iPhoto si uu u xaliyo dhibaatada. In sidaa la yeelo, hoos u hay muhiim ah amarka iyo doorasho muhiim ah oo isku mar iyo labo gool guji icon iPhoto ah. Laga soo bilaabo suuqa kala arbushin ilaa isticmaalka doorasho "tayeeyo Thumbnails". Waxaa dib u dhiska doonaa database thumbnail.
Sidaas, waxaana rajeyneynaa kartaa in ay noqon doonto mid aad muhiim u ah dhib dhibaatooyin iPhoto aad.
> Resource > Mac > Dhibaatooyinka Talooyinka iPhoto Common Arrimaha